न्यू मोर्डन एकेडेमी बुर्तिवाङका एसईई टपर विद्यार्थीको उत्कृष्ठ नतिजा कायमै ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण २७, सोमबार २१:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
राम सुवेदी, बुर्तिवाङ २०७६ साउन २७ । न्यू मोर्डन एकेडेमी बुर्तिबाङबाट २०७३ सालमा एसईई दिएका लक्ष्मण शर्मा एकेडेमीबाट ३ दशमलव ७ जिपिए अर्थात ए प्लस मा उत्तीर्ण विद्यार्थी हुन् । उनी अहिले कक्षा १२ मा पनि उत्कृष्ट नतिजा लिएर २५ जनाको सूचीमा परेका छन् ।
काठमाण्डौ मोडेल कलेजमा अध्ययनरत एकेडेमीका पूर्व विद्यार्थी शर्माले कक्षा १२ मा ३ दशमलव ७८ जिपिए ल्याएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. १ बुर्तिबाङमा घर भएका शर्मालाई कलेज एसोशिएसन अफ काठमाण्डौले हार्दिक होटलमा एक कार्यक्रमका बीच सम्मान समेत गरेको छ । नेपालका सबै कलेजहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु मध्ये कक्षा १२ मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका २५ जनालाई एशोसियसनले हरेक वर्ष सम्मान गर्ने गरेको छ ।
शर्मालाई निःशुल्क अध्ययनका लागि विभिन्न कलेजहरुले आमन्त्रण समेत गरेको उनका बाबा चिन्तामणी शर्माले बताए । शर्माका अनुसार छोराको सिए अध्ययन गर्ने चाहना रहेकोले सोही अनुसारको तयारी रहेको समेत बताए ।
न्यू मोर्डन एकेडेमीबाट अहिलेसम्म उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेको शंख्या २१ पुगेको एकेडेमीका प्रिन्सिपल दीपक कुवँर बताउँछन् । एकेडेमीमा अध्ययन गरेका पूर्व विद्यार्थी ढोनपा ३ का सागर विश्वकर्मा अहिले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा काठमाण्डौको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमविविएस अध्ययनरत छन् । यस्तै यसको एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने हरी अर्याल काठमाण्डौको द टाईम्स ईन्टरनेशनल कलेजमा अध्ययनरत छन् । अर्यालले एसइइमा एकेडेमीबाट धौलागिरीमै उत्कृष्ट नतिजा ४ जिपिए ल्याएका छन् ।
उता न्यू मोर्डनबाटै उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका सागर विक, काठमाडौको त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तरगत आइओएम शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अध्ययन पछि अहिले पूर्ण छात्रवृत्तिबाट एमविविएस अध्ययन गर्देछन् । शिक्षण अस्पतालमा काठमाण्डौमा उनी ३६ जनाको कोटामा एमविविएस अध्ययन गरिरहेका छन् । न्यू मोडैनबाट उत्कृष्ट अंक ल्याएर अध्ययनमा रहेका सबै विद्यार्थी विद्यार्थीहरु डाक्टर, ईञ्जिनियरिङ तर्फ रहेको एकेडेमीका प्रिन्सिपल कुवँरले बताए ।